Ejikọtara StaFi rETH n’ime HyperPay | by Emmanuel Ramsey | Medium
Ewepụtala StaFi rETH na HyperPay On-Chain Wallet. N’otu oge ahụ, StaFi_protocol na HyperPay ga-emekọ ọnụ wee malite mgbasa ozi StakingDrop nke malitere na August 6th wee kwụsị na 20th august, iji gbaa ndị na-ejide ETH ume ka ha sonye na ETH2.0 Staking.
Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ ETH site na StaFi rETH App na HyperPay On-Chain Wallet kesara ọdọ mmiri ụgwọ ọrụ akara ngosi FIS bụ nke ruru $10,000 usdt, dabere na ego ETH etinyere. E kesara ụgwọ ọrụ ahụ n’ụdị akara ERC-20 FIS.
HyperPay bụ obere akpa akpa ego dijitalụ nwere ọtụtụ gburugburu ụwa nke na-ejikọta obere akpa agbụ agbụ, obere akpa ngwaike HyperMate, obere akpa on-chain, na obere akpa ekekọrịta. Ọ na-enye ndị ọrụ otu nkwụsị ọrụ dị ka njikwa akụ, ntinye ego, ịkwụ ụgwọ ndị ahịa, wdg HyperPay ugbu a nwere ihe karịrị nde ndị ọrụ 1, na-ejikwa ihe karịrị ijeri $ 1 ijeri, ma hazie ihe karịrị nde 310 na-enyefe.
Pịa na njikọ enyere n’okpuru ka ịgụtakwuo maka HyperPay
StaFi bụ protocol DeFi izizi na-emepe oke nke akụ etinyegoro. Ndị ọrụ nwere ike ị nweta akara ngosi PoS site na StaFi wee nata rTokens na nkwụghachi, nke dị maka ịzụ ahịa, ebe ha ka na-enweta ụgwọ ọrụ. rToken bụ ihe nrụpụta sịntetik staking na-enye ndị ọrụ mgbe ndị ọrụ na-enweta akara ngosi PoS site na ngwa StaFi rToken (https://app.stafi.io). A kwụgidere rTokens na akara ngosi PoS nke ndị ọrụ nwere na ụgwọ ọrụ staking kwekọrọ. Enwere ike ibufe ma zụọ ahịa rToken n’oge ọ bụla.